Ithembela njani indlela yokuziphatha yokuThenga kwi-Intanethi eguqukayo | Martech Zone
Iziphatha njani iTrust kunye neNtengo yokuThengwa kwe-Intanethi
NgoLwesine, Agasti 28, 2014 NgoLwesithathu, Aprili 13, 2016 Douglas Karr
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, indlela yokuziphatha yokuthenga kwi-Intanethi itshintshe kakhulu kwi-Intanethi. Ukuba nendawo ethembekileyo iyaqhubeka nokuba ngumba ophambili obandakanyekayo kuyo nayiphi na intengiselwano kwaye ke abathengi bathambekele ekuthengeni kwiindawo kuphela abanokuzithemba. Le ntembeko ibonakalisiwe kwizatifikethi zomntu wesithathu, uphononongo olwenziwa kwi-Intanethi, okanye ubukho bevenkile. Njengoko urhwebo luqhubeka nokuhamba kwi-intanethi, nangona kunjalo. I-40% yabasebenzisi be-Intanethi kwihlabathi liphela - ngaphezulu kwesigidi sezigidi zabasebenzisi - bathenga kwi-intanethi. Esinye isitshixo sokuthembela sisango lokuhlawula.
Isango lokuhlawula elithembakeleyo njenge PayPal, apho umthengi efumana khona intengiselwano ngobuqhetseba, anokwandisa uguquko kwindawo yakho ye-ecommerce. Kuba iPayPal yeyamazwe aphesheya, ikwandisa ukuthembela kwabathengi ukwenza ishishini kwilizwe liphela.
Kuphando lwakutsha nje, I-Forrester Research Inc. ibuze abathengi base-UK abakwi-Intanethi malunga namava abo. Iziphumo zibonisa ukuba ukubonelela nge-PayPal njengenketho yokuphuma kwakha ukuthembana, kwaye kubonwa ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Ikwenza nokuba kube lula ukurhweba!
le infographic evela kwi-PayPal ibonelela ngengqondo yokwanda kwalapho abathengi bathenga khona, iisayithi abathenga kuzo, kunye nezinto ezichaphazela amaxabiso okuguqula kwi-intanethi njengesantya, lula kunye nendlela ethembekileyo yokuhlawula.
tags: Uphando lwe-ecommerce ka-2013eCommerceI-ecommerce infographicukuthembela kwi-ecommerceuphando lwe-forresterukuthengisa kwi-Intanethiinfographic yentlawuloUkulungiswa kwentlawuloItekhnoloji yokuhlawulaPayPalstatistathembauk
Lumkela iZithuba zeNdwendwe
Ukuphulaphula akwanele. Isicwangciso-buchule sakho seNtlalontle sifuna ezi zinto zi-4 ukuze uphumelele!